China 'gara kumba' Chitubu Mutambo inokonzeresa kuburitsa boom
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » China 'gara kumba' Chitubu Mutambo inokonzeresa kuburitsa boom
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kugadzirira kurasikirwa kwemisangano yemhuri, mapato ezororo uye kuungana, maChinese mazhinji akasarudza kutumira "mapasuru ezvipo"
Zviremera zveChinese zvakayambira vanhu kuti varambe vari panzvimbo yekumisa kupararira kwe COVID-19
Chinese chinoratidza kuburitsa bhizinesi kumusoro makumi maviri nemaviri muzana muzana pagore
China's expression mafemu ekuburitsa akange atumira mapasuru gumi emabhiriyoni mudzimba mumazuva makumi matatu nemasere chete gore rino
Makambani ekuendesa muChina akashuma hombe mubhizimusi panguva yeMutambo weChirimo sezvo mamirioni evaChinese vakagara vakagara kuzororo regore.
Nemusi weChina neChishanu, mazuva maviri ekutanga ezororo reSvondo Mutambo, maChinese mafemu ekuendesa akabata mapasuru anosvika mamirioni zana nemakumi matatu nematatu, kukwira kuita zvikamu makumi maviri nezviviri kubva muzana pagore, airatidza data kubva kuState Post Bureau.
Pamberi peZororo reMutambo weChirimo, chiitiko chakakosha kumisangano yemhuri iyo inowanzoona kutama kwevanhu vazhinji munyika yese, zviremera zveChinese zvakaraira vashandi vanoenda kune dzimwe nyika uye vagari kuti vagare vachidzivirira kupararira kwe Covid-19.
Kugadzirira kurasikirwa kwemisangano yemhuri, mapato ezororo uye kuungana, vazhinji vakasarudza kutumira "mapasuru ezvipo" kana kutenga online pamhuri yavo uye shamwari dziri kure, zvichipa kudikanwa kwezvinhu.
Hurumende yakavimbisa kuvimbisa zvakakwana zvekushandisa zuva nezuva uye yakabvunza e-commerce mapuratifomu uye makambani ekugadzirisa kuti ave nechokwadi chekushanda panguva iyi.
Kubva Svondo, mafemu eChina ekuburitsa pachena aive atumira mapasuru gumi emabhiriyoni mudzimba mumazuva makumi matatu nemasere chete gore rino, achigadzira rekodhi nyowani.
Iyo spell ipfupi kwazvo kupfuura mazuva makumi masere muna 80 nemazuva makumi manomwe nemasere muna 2020, akadaro State Post Bureau.